Tag: xogta Melissa | Martech Zone
Tag: xogta Melissa
Kahor shaqada internetka, waxaan ka shaqeynayey toban sano wargeysyada iyo warshadaha tooska u dira. Sababtoo ah dirista ama gudbinta isgaarsiinta suuq geynta jirka ayaa aad qaali u aheyd, waxaan aad uga taxaddarnay nadaafadda xogta. Waxaan rabnay guri kasta hal gabal, marnaba intaas ka badan. Haddii aan geynno farabadan isla isla waraaqaha tooska ah cinwaanka, waxay sababtay arrimo badan: Macaamil jahwareersan oo ka bixi doona dhammaan isgaarsiinta suuqgeynta. Kharash dheeri ah oo boostada ah ama